Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Fampifandrifiana mihetsiketsika ataon’ny Google Earth – Nampahafantarina ny Daholobe · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Novambra 2018 7:17 GMT 1	 · Mpanoratra Angelo Embuldeniya Nandika imanoela fifaliana
Niasa tsy tapaka mba hamoahana an'ilay fampifandrifiana mihetsiketsika an'ireo faritra voakasiky ny horohorontany tao Pakistana i Anne Wright sy i Randy Sargent avy amin'ny Tetikasa Global Connections . (Mibaiko tena manolo ireo sary ho aminà kalitao ambony ny atao hoe fampifandrifiana mihetsiketsika rehefa akaikezinao ny fitaradavitra, noho izany, mora kokoa ny miasa miaraka aminy.) Nanoratra i Randy sy Anne ora vitsivitsy lasa izay mba hilazàna fa efa vonona ireo fampifandrifiana mihetsiketsika vaovao:
Tranon'ny Piffers? (Failo KML ) nahita io nandritra ny fikirakirana ireo sary avy amin'ny zanabolana i Anne sy i Randy. Nanontany tena i Anne:
Manshera Helipad (Failo KML file )
Hopitaly Fampianarana ao Ayub (KML file ):
Isaorana i Kathryn Cramer  tamin'ny famoahana ilay blaogy teo ambony ary koa tamin'ny fampiantranoana ireo sary sy failo kml/kmz. Iray amin'ireo olona maro tao ambadiky ny fanampiana amin'ny fanaovana sarintanin'ilay horohorontany tao Pakistana ihany koa i Kathryn ary nanamarika sarintany manokana maro momba ilay Horohorontany tao Azia Atsimo. Raha toa ka liana ianao, afaka mijery ireo fampifandrifiana hafa sasany sy sarintany Google Earth momba ilay horohorontany tao Pakistana ao amin'ny blaogin'i Kathryn .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/15/129884/
 Tetikasa Global Connections: http://www.cs.cmu.edu/~globalconn/
 Failo KML: http://www.kathryncramer.com/home-of-piffers.kmz
 Failo KML file: http://www.kathryncramer.com/manshera-helipad.kmz
 KML file: http://www.kathryncramer.com/ayub-teaching-hospital.kmz
 Kathryn Cramer: http://KathrynCramer.com
 blaogin'i Kathryn: http://www.kathryncramer.com/kathryn_cramer/